Posted on January 10, 2020 by Qeerroo
Obsi Daangaa Qabaachuu Qaba ! Callisnis Nuuf Haa Gahu!
[SBO – AMAJJII 09,2020] Erga Dr. Abiy Ahmed EPRDF keessaa gara aangootti ol bahanii as gidiraa fi roorroon addatti Ummata keenya kan Dhihaa fi Kibba Oromiyaa irratti bulchiinsa isaaniitiin geessifamu guyyumaan hammaachaa deemuutti jira. Kanaaf sababni gama mootummaatiin kennamaa turee fi jiru “nageenya eegsisuu fi ol’aantummaa seeraa kabajsiisuu” kan jedhu dha. Biyya kanatti durii kaasee hanga har’aatti nageenyi dhabamuuf kan sababa tahaa turee fi jiru rakkoo siyaasaa afaan qawweetiin furuuf ykn. irra aanuuf yaalii gama mootummaatiin taasifamu dha. Akka hubannaa fi odeeffannoo qabnuutti yeroo ammaa rakkoo guddaan sadarkaa Oromiyaattis tahe sadarkaa Itoophiyaatti jiru rakkoo nageenyaa osoo hin taane rakkoo siyaasaa ti. Wanneen akka rakkoo nageenyaatti of mul’isanis yoo jiraatan maddi isaanii rakkoo siyaasaa hin furamin jiru dha. Rakkoon siyaasaa ammoo furmaata siyaasaa barbaada malee qawweedhaan/humnaan hin furamu.
 Qabeenya Ummataa saamuun, (maqaa sakatta’aa jedhuun manneen Ummata nagaa seenanii qabeenya Ummataa isaanitti tole saamanii fudhachuu dabalatee),
 Manneen Ummataa qabeenya waliin (bakka gariitti ammoo lubbuu namoota keessa jiranii waliin) gubuun,
 Sababaa fi ragaa, akkasumas murtii seeraatiin ala namoota nagaa hidhanii hiraarsuu fi reebicha ulfaataadhaan miidhaa fi hir’ina qaamaa irraan gahuun,
 Qonnaan bulaan akka hin qotannee fi midhaan ooyruu isaa kan bilchaate akka hin galfanne gochuun,
 Hidhattootatu keessatti dahatee nu waraana jechuudhaan midhaan ooyruu Ummataa ciruu fi gubuun,
 Hidhattoota qunnamte, karaa agarsiiste, mana kee bira dabran ykn. gargaarte fi … kkf. jechuudhaan bakkayyuutti namoota nagaa jumlaanis tahe akka arganitti ajjeesuun,
 Haadhaa fi intala dirqisiisanii wal biratti gudeeduun,
 Yakki Ummata nagaa irratti dalagamu kun akka dafee hin dhagahamneef fi birmannaa hin arganneef qunnamtii akka telefoonaa fi interneetii irraa kutuun, … kkf.